Shiinaha Raaxo Naqshadeynta wareegga buuxa taabashada IPS midabka shaashadda midabka wareega Smart watch H58 soosaarayaasha iyo alaableyda | anytec
H58 Jaangooynta Jijin
Hawlaha 24 saacadood ayaa sii socota ogaanshaha heerka garaaca wadnaha, baaritaanka cadaadiska dhiigga ， ogaanshaha hurdo sax ah
Soo bandhigid saacad / saacad, kalooriyo, hurdo, ， kamarad, shid shidida / dansiga ， Habka isboortiga ， F Wareegga jirka dumarka
Xusuusin wicitaan, xusuusin SMS, xusuusin qq, xusuusin Wechat, skype.whatsapp.facebook.linkedin.twitter.viber.line
Saacadda digniinta / Xusuusin fadhiga
Hal-fure cabirka garaaca wadnaha pressure cadaadiska dhiigga
Sooc shaashadda Taabasho buuxda / wareega smart leh 1.1 inch IPS screen Resolution240 * 240
Nooca Bluetooth BLEX 4.2
Qalabka PPG HR3313
xusuusta 512KB + 64M
wax Qolof bir ah + Suunka birta
Cabbirka Xirmada Miisamaynta 148 * 70 * 36MM
Cabirka Ctn 375 * 200 * 315mm
Miisaanka madaxa keliya + suunka 41.5g
Cabbirka saacadda 39.7mm * 11.3mm * 227mm
Wadarta miisaanka (KG) 5.1kg
LUQADA UI Shiinees (Fudud, Dhaqameed), Jabbaan, Ingiriis, Faransiis, Jarmal, Talyaani, Isbaanish, Ruush, Boortaqiis, Kuuriyaan, Polish
Soo Degso / Ku rakib jijin Codsiga Isku-duwaha App-ka Android iyo Apple: F FIT
Aragtida ugu horeysa waxaa lagu arkaa raaxo qafiif ah, oo leh zinc alloy full-wareega oo buuxa, taabasho buuxa 1.1inch qeexitaan sare 240 * 240D muraayad IPS shaashad leh, oo leh noocyo kala duwan oo dilas ah oo kala duwan oo la imanaya suunka biraha dahabka leh ee casriga ah, waa sidaas heer sare ah oo aad si fudud ugu xiranaan karto si aad u shaqeyso ama aad ugu ekaato labis wanaagsan, la kulan munaasabado kala duwan oo maalinle ah.
Si otomaatig ah ula soco heerka garaaca wadnahaaga waqtiga dhabta ah, oo waxaad siisaa falanqeyn dhameystiran oo ku saabsan tayada hurdadaada (hurdo qoto dheer, hurdo yar iyo hurdada toos) si ay kaaga caawiso inaad horumariso qaab nololeed caafimaad qaba.
Xusuusinta wicitaanka, digniinta farriinta iyo dirista, waxaad heli kartaa wicitaan, qoraalka SMS iyo fariimaha SNS oo ay kujiraan wicitaan soo socda, ogeysiis SMS ah, QQ, wechat, Linkedin, skype, farriin facebook, Twitter, whatsapp, viber, Line, gmail, aragti, Instagram, snapchat.marka saacadda caqliga leh ay kuxirantahay taleefanka casriga ah.Wey gariiri doontaa si aan kuu xusuusiyo waqtiga wax kasta oo muhiim ah waxaadna si toos ah uga akhrisan kartaa farriimaha qeybta oo dhan saacadda.
Iyada oo la xusuusinayo xilliga jir ahaaneed ee dumarka, saacadda smart waxay gacan ka geysaneysaa xusuusinta xilliga caadada si fiiro gaar ah loogu yeesho isku darka cuntada iyo jimicsiga si wanaagsan loogu hagaajiyo jirka. sidoo kale saadaali xilliga jir ahaaneed ee haweenka, xilliga aaminka ah, xilliga ugxantu soo baxdo, muddada uurka, Runtii waxay daboolaysaa baahiyaha dhabta ah ee haweenka. Hadday tahay shaqo ama ciyaar.
Soo bandhigida saacadda / saacadda, saacadda-saacadda, kalooriyada, shidida / deminta bandhigga, Xusuusinta fadhiga, hagaajinta dhalaalka, iskuxirka goobaha, raadso taleefanka. Kaamirada xakamaynta fog (rux rux si aad sawirro uga qaaddo)
Kormeerka hurdada, si toos ah ula soco oo u falanqee tayadaada hurdo maalinta oo dhan oo waxay ku siisaa hurdo qoto dheer, hurdo fudud iyo waqtiga tooska (kaliya qor diiwaanka hurdada oo soconeysa in ka badan 3 saacadood).
IP67-ka laga dhigay biyo la'aan, waxaa la gashan karaa roob, gacmo-dhaqashada, wejiga oo la maydho, iwm. Laakiin MA aha dabaal iyo qubeys
Taageer qaabab isboorti oo badan, oo ay ku jiraan orodka, fuulitaanka, socodka, fuulista, kubada cagta, kubbadda koleyga, Pingpong, dabaasha badminton.
Hore: Shaashad midab wadnaha wadnaha fayadhawrka qumman ee GPS-ka isboortiga H3
Xiga: Daawashada saacadaha casriga ah ee quruxda badan leh gabdhaha jilicsan smart H8
H88 Smart Call jijin Double Arc Taabashada Color ...
Daawasho Wanaagsan Haweenka Ciyaaraha Caqli smart ...